low-ဆိုဒီယမ် calcined Alumina (HA) စီးရီးကြမ်းအမှုန့်
YUFA Group သည်ဆိုဒီယမ်အနိမ့်ဆိုဒီမီနီနာစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနများစွာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
၁။ Na2O ပါဝင်မှုသည် ၀.၀၁% အောက်လျော့နည်းနိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန် application များအတွက်သင့်လျော်သော
ကြွေထည်အတွက်အနိမ့်ဆိုဒီယမ် calcined Alumina (CA) စီးရီး
YUFA အုပ်စုသည်အမျိုးမျိုးသောကြွေထည်မြေထည်ပစ္စည်း alumina စီးရီးများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပူပြင်းသောပုံသွင်းခြင်း၊ isostatic နှိပ်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်အခြားဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်များအတွက်သင့်လျော်သည်။
၁။ ၀.၁% အောက်အောက်ဆိုဒီယမ်နိမ့်သည်။
2. မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Alumina
3. Crystal အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
ဆန့်ကျင်ဘက်ပစ္စည်းများအတွက် calcined Alumina (RA) စီးရီး
YUFA Group သည်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောဆန့်ကျင်ဘက် calcined alumina ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
သီးသန့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်အဆင့်မြင့် rotary kiln နှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသုံးစက်များအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော calcined alumina ဆန့်ကျင်ဘက်ကုန်ကြမ်းများကိုပြည်ပစျေးကွက် ၄၀ ကျော်တွင်ကောင်းစွာရောင်းချကြသည်။
1. အမြောက်အများသိပ်သည်းဆနှင့်အတူ, ပုံသဏ္unာန်ပျက်သောစက်ရုံများ၏ရေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချ
၂။ မူလကျောက်သလင်းသည်သေးငယ်သော်လည်း၊ ပိုကောင်းသည့်ဖျော်ရည်နှင့်အသံတည်ငြိမ်မှုရှိသည်
(၃) အခြားအလွန်ကောင်းမွန်သောအမှုန့်များပမာဏကိုလျှော့ချပါသို့မဟုတ်အစားထိုးပါ။ အပူလွန်ကဲသောအပူချိန်မြင့်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ
ပိုလန်များအတွက် calcined Alumina (PA) စီးရီး
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်၍ ပိုလန် calcined alumina အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်သည်။ စီးရီး
1. ဒဏ်ငွေပိုလန်စီးရီး: မူရင်းကြည်လင် 1 μmထက်နည်းသည် ၂ 3. ခရမ်းရောင်ဖယောင်းကြမ်းတမ်းသောအရောင်တင်ရန်အထူး
အပူစီးကူးမှုအတွက် calcined Alumina (FA) စီးရီး
Alumina သည်အပူစီးကူးခြင်းနှင့်လျှပ်ကာခြင်း၏အားသာချက်များရှိပြီးအပူကူးကူးနိုင်သောလျှပ်ကာကော်၊ potting ကော်နှင့်အခြားပေါ်လီမာပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်ရာတွင်အပူစီးမှုဖြည့်သည့်အရာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အပူကူးမှု alumina သည်အပူချိန်မြင့်မားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ထုတ်လုပ်သောအဖြူရောင်အမှုန့်ပုံဆောင်ခဲဖြစ်သည်။ ပုံဆောင်ခဲအမှုန့်များစွာရှိသည်။ အပူစီးကူးမှုအတွက်အသုံးပြုသော alumina တွင်အမြှေး alumina, Quasi-Sherical Alumina နှင့်ပေါင်းစပ် alumina တို့ပါဝင်သည်။
1. ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုန်အရွယ်အစားဖြန့်ဖြူးခြင်း, မြင့်မားသောအဆာနှုန်း, အနိမ့် viscosity နှင့်ကောင်းမွန်သော fluidity အရောအနှောကိုရရှိနိုင်သည်
2. မြင့်မားသောအပူစီးကူးမှု၊ ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရောအနှော၏အပူစီးကူးမှုမြင့်မားပါသည်
3. နိမ့်ကျပွန်းပဲ့မှုနှုန်း: ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ရောနှောခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းမှို၏ပွန်းပဲ့သေးငယ်သည်
အထူးမျက်မှန်များအတွက်ဆိုဒီယမ်အနိမ့်ဆိုဒီယမ် calcined Alumina (SA) စီးရီး
YUFA Group ၏α-Alumina သည်ထူးခြားသော calcined ဖြစ်စဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးမြင့်မားသောသန့်ရှင်းမှု၊ Fe2O3 ပါဝင်မှုနိမ့်ကျသောလက္ခဏာများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည် LCD ဖန်သားမျက်နှာပြင်နှင့်မြင့်မားသောအလူမီနီယံအဖုံးများအတွက်အဓိကကုန်ကြမ်းဖြစ်သည်။
1. မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် & အလွန်နိမ့်အညစ်အကြေး။
2. မြင့်မားသော alpha အဆင့်ကူးပြောင်းမှုနှုန်း။
Alumina ကြွေထည်အတွက်ကြွေထည်မြေထည်အမှုန့် (GA) စီးရီး
YUFA Group သည်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု alumina နှင့်သင့်လျော်သောအမှုန်အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်၍ ဖိအား (သို့) centrifugal မှုန်ရေမွှားနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ၉၂၊ ၉၅၊ ၉၉၊ ၉၉.၅ နှင့်အမှုန့်မှုန်အမှုန့်များကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်ခြောက်သွေ့သောဖိခြင်း၊ လျင်မြန်စွာပုံနှိပ်ခြင်း၊ isostatic နှိပ်ခြင်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်သင့်တော်သည်။
YUFA Group သည်မီးပွားပလပ်နှင့်ကြွေထည်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကြွေထည်များ၊ ရေနံတွင်းသုံးစက်ကိရိယာများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အထူးပြုသည်။ isostatic နှိပ်ခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်သောကြွေထည်မြေထည်များအသုံးပြုခြင်း။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောမီးပွားပလပ်များ၊ ကြွေထည်များနှင့်အရှည် ၁၅၀ မီလီမီတာထက်နည်းသောအခြားထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
အထူးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်အရည်ပျော်စေသော Monocrystalline fused alumina သည်အဆင့်မြင့်ကြိတ်ခွဲထားသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပွန်းစားသောအမှုန်များသည်အဖြူရောင်များဖြစ်သည်။
4.High အမြောက်အများသိပ်သည်းဆနှင့်မြင့်မားသော wear ခံနိုင်ရည်
6. သေးငယ်တဲ့ကျောက်သလင်း, အ workpiece ပျက်စီးစေခြင်းငှါမလွယ်ကူ
Fuse သိပ်သည်းသော corundum သည်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောဆန့်ကျင်ဘက်ပစ္စည်းများအမျိုးအစားသစ်ဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောသန့်ရှင်းမှု alumina ကို အသုံးပြု၍ အေးဂျင့်ကိုအချိုးအစားဖြင့်လျှော့ချခြင်း၊ လျှပ်စစ် arc မီးဖို၌အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်အအေးပေးခြင်းတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ အဓိကကျောက်သလင်းအဆင့်သည်α-Al2O3 ဖြစ်ပြီးအရောင်သည်မီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်။
1.High အမြောက်အများသိပ်သည်းဆနှင့်အလွန်နိမ့် porosity
2.Excellent wear ခုခံ
hign အပူချိန် 3.Good slag ခုခံ
5.Good အပူ shock ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်